दराजमा सामान किन्दा याद राख्नुपर्ने एकदमै जरुरी कुरा - Daraz Life
Daraz partners with NLG Insurance: Getting all its employees insured against COVID-190150
npblog July 3, 2020 6:01 PM July 5, 2020
Community, Daraz, News, Press Release
Now Shop at Daraz and Pay via eSewa088
npblog June 30, 2020 5:39 PM June 30, 2020
Top5Online Games to Play on Daraz First Games!0352
npblog June 9, 2020 10:17 AM June 25, 2020
How to useaVoucher Code on Daraz? Find out here!0228
npblog June 7, 2020 1:35 PM June 7, 2020
दराजमा सामान किन्दा याद राख्नुपर्ने एकदमै जरुरी कुरा0798
Umanga Khatiwada August 1, 2019 3:57 PM April 28, 2020
दराजमा कुनै पनि सामान किन्नु अघि सबै भन्दा पहिला के प्रश्न गर्नु हुन्छ ? सामान राम्रो छ कि छैन भनेर हैन? सामान को गुण्स्तर चेक गर्न दराजमा धेरै फिचरहरु राखिएका छन्। ती मध्ये एउटा हो प्रोडक्ट् रिव्यू र रेटिङ्गस्। प्रोडक्ट् रिव्यू र रेटिङ्गस् यस्तो सुविधा हो जसबाट उपभोक्ताहरुले आफुले किनेको सामानको बारेमा प्रतिकिया दिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा राम्रो सुझाव त जसले त्यो प्रोडक्ट् किन्नु भएको छ, उनै बाटनै आउँछ, हैन त ? त्यैसैले प्रोडक्ट् रिव्यू र रेटिङ्गस् याद राख्नुपर्ने एकदमै जरुरी कुरा हो। त्यसैले, आज म तपाइलाई, प्रोडक्ट् रिव्यू र रेटिङ्गस् कसरी गर्ने भनेर सिकाउनेछु।
4 steps to write review and ratings
सबै भन्दा पहिला दराज एप खोल्नुहोस् र लग इन गर्नुहोस्।
होमपेजमा जानुहोस र तलको अक्काउन्ट आइकोनमा ट्याप गर्नुहोस्।
अक्काउन्ट पेजमा, “To Review” मा ट्याप गर्नुहोस । यहाँ तपाईले किन्नुभएको सामानहरु लिस्ट हुन्छ।
कुनैपनि सामानलाइ सेलेक्ट गरी प्रतिक्रिया दिनुहोस।
तपाइलाई सामान कस्तो लग्यो भनेर जनाउन तपाइले १ देखि ५ तारा अथवा रेटिङ्ग दिनुहोस्, जहाँ ५ तारा भनेको एकदमै राम्रो र १ भनेको चित्त नबुझ्दो।
प्रतिकिया लेख्दा तपाइलाई सामान कस्तो लाग्यो भन्नुहोला । तपाइलाई के राम्रो या नराम्रो लागेको छ सबै कुरा भनिदनुहोला । तपाईले यहाँ सामानको फोटो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ।र सेलरलाई पनि रेटिङ्गस् दिन सक्नुहुन्छ।
केहि समय पछि तपाइको रिव्यू र रेटिङ्गस् उक्त प्रोडक्ट्को प्रोडक्ट पेजमा हेर्न मिल्नेछ जसले अरु ग्राहकहरुलाई निक्कै सहयोग पुग्नेछ।
यसरीनै तपाईलेअरुको रिव्यू र रेटिङ्गस्हरु पनि हेर्नसक्नुहुनेछ। कुनैपनि प्रोडक्ट पेजमा तल स्क्रोल गर्नुहोस त। त्यहाँ तपाईले प्रोडक्ट्को रिव्यू, रेटिङ्गस्, विशेसता सबै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले उक्त प्रोडक्ट्का बारेमा सेलरलाई थप प्रश्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सेलर सँग प्रतक्ष च्याट पनि गर्नसक्नु हुन्छ।
देख्नु भयो त, एक्दमै सजिलो छ । थप जानकारीका लागि उक्त लिङ्कमा जानुहोस् http://bit.ly/darazhelpcenter
दराजका नयाँ–नयाँ अफरहरु तथा सुविधाहरुको फाइदा उठाउन आजै दराज एप डाउनलोड गर्नुहोला।
Previous ArticleINSTANT MESSAGING : A NEW FEATURE ON DARAZ APPNext Articleके हो दराजमल? जान्नुहोस दराजमलमा शपिंग गर्नुका फाइदाहरु
Daraz partners with NLG Insurance: Getting all its employees insured against COVID-19
Top5Online Games to Play on Daraz First Games!
How to useaVoucher Code on Daraz? Find out here!
Best Smartphones Under 25000 in Nepal 2019 (Updated) 8393
How To Become A Daraz Seller in Nepal 5464
Samsung Galaxy M30s: Specs, Review & Price in Nepal 4856
Redmi Note7Pro 6GB/128GB Specs and Price in Nepal 4100
Best Smartphones under 25000 in Nepal in 2020 3463